Iyo Gnome Foundation inobatsira zvakare mukusimudzira kweLibrem 5 | Linux Vakapindwa muropa
Svondo rapfuura takadzidza nezve mushandirapamwe wekubhadhara vanhu weLibrem 5, yekutanga smartphone nePlasma Mobile kubva kukambani yePurism, uye iyo KDE Project. Kunyangwe iyo mari isinga svike, rutsigiro kana ivo vari kuwanda.
Munguva pfupi yapfuura, iyo Foundation Gnome yakazivisa kuti ichabatsira Purism neLibrem 5 saka kuti hwaro software iriko pane yekutanga KDE smartphone.
Iyo Gnome Foundation yakaratidza kuti havazobheja pane nyowani nhare kana software nyowani, nekuti musika wefoni unoguta uye vashandisi vazhinji vari kubheja paGoogle's Android. Zvisinei, kana izvozvo inobatsira vashandisi veLibrem 5 kunakidzwa neGnome Shell uye Gnome software pane chishandiso, nekudaro kushanda pamwe neiyo KDE Project uye iyo Purism kambani.
Iyo Gnome Foundation ichabatana kuti iunze Gnome Shell kuLibrem 5
Izvi hazvireve kuti isu tine Gnome interface yemafoni nhare, asi zvinogona kana isu tine Gnome interface patinobatanidza iyo smartphone kune yekutarisa kana chidzitiro. Chinongedzo kana basa ringave rinonakidza kune vashandisi veLibrem 5.
Chero zvazvingaitika, mukushayikwa kwe Mazuva makumi matatu nemaviri ekupedza mushandirapamwe de kuwanda kwevanhu kupfuura Purism yakagadzirirwa Librem 5, chirongwa ichi chinoda miriyoni yemadhora. Mari yakakwira chaizvo inoratidza kuti Librem 5 ichave nedambudziko rekushongedza.
Rutsigiro rweGnome ne KDE zvinotungamira kuti chishandiso ichi chizozadzikiswa, asi pamwe kwete sePurism inoda kana kufungidzira. Pamwe mamwe makambani nemasangano anotanga kubatana kuvandudza Librem 5, asi panguva ino isu chete tinoziva KDE neGnome. Zvisinei Pachave paine chero kugovera kunotsigira kugadzirwa kweiyi smartphone? Ko Librem 5 ichave iri smartphone yeLinux nevashandisi vayo?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Iyo Gnome Foundation inobatsira zvakare mukusimudzira kweLibrem 5
Hmm, hapana imwe nzira kunze kwekupa iko kubatana, zvikasadaro zvinoramba zvakaita sekuhwanda pamberi penzanga Izvo hazvisi zveudyire, mupfungwa iyoyo ini ndinobvumirana naLinux Mint's Clement Lefebvre pakupa mashoma mashoma maficha asi kuigadzirisa.
Iyo purojekiti ichaenderera mberi, asi isu takatanga nedambudziko rakafanana munyika yeGNU / Linux nhasi paPC's: kupa kuenderana uye kutsigira kune wese munhu uye nharaunda iyi ine atomized. Tichifunga nezvekushomeka kwemari ivo vanofanirwa kuwana rubatsiro kubva kune wese munhu anoendesa uye mukufamba kwenguva ivo vanorasikirwa nekugona.
Nezvose zvaunazvo kuenda mberi kubva kumashure, vanofungidzira.
Nezvose zvaunazvo kufambira mberi nekuti ivo vanofungidzira kumashure
ArchLabs Linux Minimo, kugoverwa kweavo nostalgic yeCrunchbang